Walcott iyo Koscielny oo Arsenal dib ugu soo celiyey Kaalinta 4 aad
HomeWararka MaantaWalcott iyo Koscielny oo Arsenal dib ugu soo celiyey Kaalinta 4 aad
Theo Walcott ayay culays badan ka dul qaaday dib u soo kabashadii Arsenal ee guulaha ciyaarta Derbiga woqooyiga London kadib markii ay 2-1 kaga guulesatay kooxda Leicester City.
Xidiga xulka Ingiriisku wuxuu shabaqa ku ruxay goolkii labaad ee Naadiga Gunners ay guushu ku raacday, isagoo labeeyey mid Laurent Koscielny uu ku furay gool dhalinta ciyaartan xidiagaha tababare Arsene Wenger ay dhibcaha ku qaateen garoonkooda the Emirates, iyagoo ka soo kabtay guuldaradii Sabtidii Tottenham ku baday garoonka White Hart Lane.
Natiijadan ayaa kooxda Arsenal ku soo celisay kaalinta afraad ee kala saraynta horyaalka, oo laga yaabo inay sii hayaan maalin kaliya, Ciyaaryahan Walcott ayaa cabiraya dareenkiisa kadib markii ay saddexdi dhibcood hanteen.
“Kadib niyad jabkii ciyaartii derbiga ahayd had iyo jeer wey fiican tahay inaad natiijo heshaa,” ayuu ku yidhi Sky Sports. “Qaab ciyaareedkii aanu soo bandhignay ma ahayn mid u wanaagsan sidii aanu ahaan jirnay laakiin saddexdii dhibcoodba waanu ku guuleysanay.
Liverpool Oo Mar Kale Mqn City Kaalinta Saddexaad Kala Baxday
Real Madrid Oo La Soo wareegtay Roberto Carlos-ka Cusub
24/07/2014 Abdiwahab Ahmed
Goals & Highlights: Sevilla 2 – 1 Cadiz